musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Mutsva Inotevera-Chizvarwa COVID-19 Vaccine
"Tinokurudzirwa nekutanga kuchengetedza uye immunogenicity profile yeReCOV muyedzo iyi yeFIH," akadaro Dr. Liu Yong, Sachigaro uye General Manager. "Prophylactic vaccine ichiri nzira inoshanda yekudzivirira hutachiona hweSARS-CoV-2 uye kudzora denda repasi rose. Isu tiri kutarisira kupa chizvarwa chinotevera cheCCIDID-19 yekudzivirira ine mukana mukuchengetedzeka, kushanda nesimba uye kuwanikwa, uye tichasimudzira ReCOV muzvidzidzo zvakakura zvekiriniki munguva pfupi iri kutevera kuti tiongorore kushanda kwayo uye kuchengetedzeka. "
Boka iri rakanyoresa vatori vechikamu 25 vaive nemakore 18 kusvika ku55 ezera. Mukutongwa, iyo SARS-Cov-2-neutralizing antibody geometric mean titers (GMTs) yakashandurwa kuita WHO/NIBSC unit yeIU/mL kuti ienzaniswe nekuita neutralizing antibody titers nemamwe emamwe majekiseni anoshandiswa zvakanyanya. Recbio akawana maGMTs e1643.2 IU/mL yekumisa masoja ekudzivirira chirwere pamazuva gumi nemana mushure memadosi maviri eReCOV, aine ese seropositive rate (SPR) uye seroconversion rate (SCR) se14%, zvichiratidza kushanda kunovimbisa kweReCOV mukudzivirira SARS-COV-100. zvinokonzerwa nezvirwere. SARS-CoV-2 neutralizing masoja ekudzivirira chirwere akaitwa nepakati marabhoritari yechidzidzo (2Biolabs). Zvinoenderana neachangoburwa pre-kudhindwa ongororo360, iyo GMT yeSARSCoV-1 neutralizing masoja ekudzivirira chirwere aive 2 IU/mL uye 1404.16 IU/mL mazuva gumi nemana mushure medosi mbiri dzeModerna neBioNTech/Pfizer mRNA, zvichiteerana.
Recbio yakagadzira matatu ekucheka-kumucheto tekinoroji mapuratifomu einoveli adjuvant budiriro, protein engineering uye immunological evaluation. Ichitsigirwa nemapuratifomu aya, Recbio inoenderera mberi nekutsvaga nekugadzira sutu izere yevanoda vaccine vevaccine, senge chizvarwa chinotevera cheHPV, shingles uye Flu vaccine.
Rasta Mann anoti:
Hauzofungidzire kuti nyaya yako iri kupa tariro yakawanda sei kuvanhu vakaita seni nenyika yangu, iri kune rumwe rutivi rwenyika. Takarasa tariro zvachose yekuti tichabuda mugedhi here maererano nedenda reCovid iri. Linda maam, you are not less than the messenger of God. Mwari vanokuchengetedza iwe, mhuri yako nenyika yako zvakare.